IZINQINISO: UMartin Vrijland
Manje njengoba siyazi ukuthi inkinga iyini, yisiphi isixazululo?
ahanjiswe IZINQUBO, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-7 December 2017	• 21 Amazwana
Uma ngabe ukhona kule sayithi okwesikhashana, kungenzeka ukuthi ufike esiphethweni sokuthi izinto eziningi emhlabeni azilungile. Kungenzeka ukuthi uthola ukuthi izindaba zivame ukukwenziwa nokuthi igama elithi 'izindaba ezikhohlisayo' liye laqalwa ukuze uthole ukuzimela kulokho [...]
Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani, abantu bahlala bengaboni isimo sabo
ahanjiswe IZINQUBO, IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-5 December 2017	• 10 Amazwana
Lokhu ekuseni ngiphaphama nge umbuzo abantu abaningi kanjani ekuseni empeleni uthenge nelwatinchanti lwabo bekuyoba 'sekukhanyeni ngaphambi kokuba ubambe ifoni yabo, vula umculo othile noma i-TV noma i-Facebook ukuqala ukuncela okokufaka zangaphandle. thina empeleni abe nesikhathi "yakhe" noma sizobe ukudubula ngqo 'isenzo' imodi. Futhi [...]
Ukuvakasha okuphelele: 2.507.180
ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003
Amandla wenguquko aqala ngokuchitheka kovalo, izinhlelo nezinkohliso zamanga bese ephenduka inguquko eyiqiniso
I-iPhone ifihla uhlelo lokusebenza lwe-covid-19 ekuvuseleleni i-i-OS 13.5 kwakamuva
UMaurice de Hond uthola ukungabi nalutho kwemizuzu eyodwa nohhafu (ividiyo)
Bangaki abantu baseDashi abangakwazi ukukhokha izikweletu zabo ngesikhathi senhlekelele ye-corona?
bounz op I-iPhone ifihla uhlelo lokusebenza lwe-covid-19 ekuvuseleleni i-i-OS 13.5 kwakamuva
Hlaziya op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003
I-Oxel op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003
I-Riffian op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003
Ukushona kwelanga op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza uBart Gates ka-2003